Amoxicillin L. Powder - Shiinaha NCPCVET
NAME: Amoxicillin L. Powder Main koobnaan cunto: qof Amoxicillin, wax soo saarka Tani waa caddaan ama ku dhawaad ​​cad budo. Tilmaamayaasha: Amoxicillin waa aminopenicillin ballaadhan-spectrum ah oo lagu qorey in daaweynta cudurrada bakteeriyada sida actinomycosis, cudurada biliary-mareenka, lafaha iyo xubnaha, exacerbations ba'an boronkiitada daran, caloosha, (oo ay ku jiraan enteritis coli Escherichia iyo enteritis Salmonella, laakiin ma xundhurta), jabtada, cudurada afka, sinusi ...
Alaabta Tani waa cad yahay ama ku dhawaad ​​cad budo.
Amoxicillin waa aminopenicillin ballaadhan-spectrum ah oo lagu qorey in daaweynta cudurrada bakteeriyada sida actinomycosis, cudurada biliary-mareenka, lafaha iyo xubnaha, exacerbations ba'an boronkiitada daran, caloosha, (oo ay ku jiraan enteritis coli Escherichia iyo enteritis Salmonella, laakiin ma curuka xundurta ), jabtada, cudurada afka, hogaga, otitis media, pneumonia (marka laga reebo meesha Mycoplasma looga shakisan yahay), tiifowga iyo laambiya, cudurada kaadida-mareenka, bakteeriyada meningitis iyo prophylaxis ee endocarditis. Waxaa sidoo kale loo isticmaalaa in lagu daaweeyo cudurka faraxnay.
On mareenka caloosha iyo mindhicirka caadi leeyihiin faragelin xoog leh.
Iyada oo ku saleysan alaabta this. Oral: hal dose, miisaanka digaag: 0.067-0.1g halkii miisaanka jidhka 1kg, laba jeer maalintii muddo 5 maalmood ah, la cabo isku dhafan: 0.2g per 1L oo biyo ah, digaag 3 ilaa 5 maalmood.
(2) bakteeriyada Gram-positive penicillin u adkaysta waa in aan la isticmaali.
(3) Haddaba iyadoo la isticmaalayo hadda.
(4) Ha wada isticmaalaan daroogooyinka xumadoodu.
Waayo, digaag: 7 maalmood
Ku kaydi meel gudcur ah, iyo hawadu.
Previous: Amoxicillin L. Powder
Next: Ampicillin Sodium L. Powder
10% Amoxicillin L. Powder
30% Amoxicillin L. Powder
Amoxicillin L. Powder 10%
Amoxicillin L. Powder 20% Chicken Isticmaal
Amoxicillin Water L. Powder
GMP Certified Amoxicillin L. Powder
High Quality Amoxicillin L. Powder
xamaam Medicine / Amoxicilline L. Powder
Digaag Medicine Amoxicillin L. Powder 20%
L. Powder Amoxicillin
Veterinary Amoxicillin Water L. Powder
Veterinary saaraha Amoxicillin L. Powder
Gentamycin sulfate L. Powder
Ampicillin Sodium L. Powder
Sulfamonomethoxine Sodium L. Powder